Xildhibaanada Hirshabeele oo yeeshey kulan Buuq Hareeyey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Xildhibaanada Hirshabeele oo yeeshey kulan Buuq Hareeyey.
Xildhibaanada Hirshabeele oo yeeshey kulan Buuq Hareeyey.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta u ah maamul gobolleedka Hirshabeelle ayaa sheegaya in ay kulan maanta ay halkaa ku yeesheen xildhibaannada baarlamaanka Hirshabeelle lagu kala tagay kadib markii leysku khilaafay ansixita xubnihii gollaha wasiirada uu dhawaan magacaabay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble.
Inkastoo wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar sheegayaan in cod gacan taag ah lagu ansixiyay gollaha wasiirada, hadana dhinaca kale xildhibaannada ka soo horjeeda arintan ayaa is hortaag ku sameeyay in la tiriyo codadka xildhibaannada kuwaa oo buuq iyo jahwareer ka dhax abuuray fadhiga, iyaga oo markii danbe dibada uga baxay, islamarkaana sheegay in aysan aqbali doonin natiijada ka soo baxda kulanka maanta oo ajandihiisu ahaa ansixinta gollaha wasiirada.
“ Balanta waxaa ay aheyd in Madaxweyne Cali Cabdulaahi Cosoble, uu hor yimaado Baarlamaanka, ka bacdina su’aalo laga weydiiyo 54-ta wasiir ee uu soo magacaabay, kadibna mooshinka maalin kale loo qabto, balse Madaxweynaha oo aan Baarlamaanka imaan, ayuu Guddoomiyaha Baarlamaanka uu soo hormariyay dooda mooshinka, taasina waa sababta dhalisay khilaafka maanta ee Baarlamaanka”, sidaasi waxaa Hiiraan Oinline u sheegay Xildhibaan Cabdulwali Sheekh.
Xildhibaannada maamulka Hirshabeelle ayaa horay qaarkood u sheegay in aysan aqbali doonin xubnaha golaha wasiirada uu soo dhisay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble, waana tan keentay in uu jahwareer galo habsami u socodkii howlaha maamulka.
Previous articleHawlgalka Amisom ee Soomaaliya oo la sheegey in aan leysku haleyn karin(AMISOM).
Next articleHantidii Allaha u naxariistee EX-gen. Cadami oo dad isbaheystey doonayaan in ay ka dhacaan ama Boobaan Agoontii uu ka tagey Marxuumku.